Gaas: Puntland ma aqbalin wax la yiraahdo 4.5
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas
BOSASO- Madaxweynaha Puntland oo wareysi gaar ah siiyey Idaacada VOA qaybteeda Afka-Somaliga ayaa sheegey in shirka Kismayo ee madaxda Somalida iskugu timid aan lagu tilmaami karin mid bur-burey.
Mundane Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa sheegey in la-wada hadley islamarkaana aan la gaarin heshiis kama dambeys ah balse ujeedadu aheyd in la yareeyo farqiga u dhexeeya dhinacyada Somalida.
Madaxweyne Gaas oo wax laga waydiihyey warar sheegaya in Puntland ogolaatey nidaamka 4.5 lakiin arrimo ku saabsan aqalka sare la isku mari waayey ayaa sheegey ineysan wax ka jirin wararkaas.
“ Wax ka jira ma jiraan, aqalka sare iyo aqalka hoose waa isku xiran yahiin, midna gaar looma dhisi karo midna gaar loogama gorgortami karo, lakiin waxaa la leeyahay Puntland baa ogolaatey aqalka hoose marka aqalka sare ayaa lagu gorgortamayaa wax jira ma aha”
Madaxweynaha Puntland ayaa wareysigaan ku sheegey in meshii shaley la joogey in laga gudbo tahay si loo helo nidaaam wanaagsan oo dadku heshiis ku yihiin kasoo leh matalaad dhab ah.
Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa dhinaca kale albaabka u furey wixii xal la moodo in laga hadli karo isaga oo xusey in shacabka Puntland u wakiisheen islaamrkaana u sheegeen mowqifkooda.
“Shacabka Puntland fartiin bay na faareen mowqifkoodana waa noo sheegeen waana noo igmadeen in aan dadka Somalida oo wax nagala dhexeeyaan in aan kala hadli karno, in dadka guud ee Soomliyeed-ah loo arko in wax la iska yiraahdo way noo wakiisheen iyagaa wakiil uga aheyn, way imaaneysaa in boqolkiiba boqol qof walba waxa uu doono uusan heli doonin, lakiin hada meeshaas maba joogno.”
Madaxweynaha oo wax laga waydiiyey kulanka Muqdishu loo balansan yahay maalmaha soo socda ayaa sheegey inuu maqley balse uusan caasumaad dhab ah weli helin balse Puntland ka qayb galeyso.
Wareysiga madaxweynaha Puntland ayaa ku soo bergmaya xilli ay soo baxeen warar sheegaya in tanaasul uu ka sameeyey in nidaamka 4.5 lagu qaybsado Barlamanaka Federaalka oo shaqadiisa bilaabi doono dabayaqada sanadka 2016.
Beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saartey ku sheegtey madaxda Somalida maalmaha soo socda soo gudbiyaan qaabka ay u dhaceyso doorashada Somalia iyaga oo hoosta ka xariiqey ineysan jirin wax kororsiimo ah.
VOA_ Halkan ka dhageyso wareysigaan
Dowlada Federaalka Somalia oo qoraal soo saartey
Soomaliya 28.01.2016. 12:02
Xukuumada Ra'isal wasare Cumar Cabdirashid ayaa soo saartey go'aanka lagu gaarey qaabka doorashada Somalia u dhaceyso kadib markii beesha caalamka tageertey fikirkii madaxda dowlada Federaalka Somalia.
Maamulada Somalia ayaa tageerey nidaamkaan marka laga reebo maamulka Puntland ...
Gaas oo la kulmey waxgaradka gobolka Barri
Puntland 23.01.2016. 00:37
Madaxweyne Gaas oo ku wajahan magaalada Muqdishu
Puntland 21.01.2016. 20:13
​MUQDISHU: Hogaamiyaasha Madasha iyo beesha Caalamka oo is-khilaafsan
Soomaliya 22.12.2016. 12:52
Isimada Puntland oo ka wadahadley nidaamka 4.5
Puntland 08.02.2016. 12:14
Beesha caalamka oo baaq digniin ah u dirtey madaxda madasha Qaranka
Soomaliya 21.12.2016. 21:49
Puntland: Gaas oo ku soo wajahan magaalada Garowe
Puntland 04.02.2016. 07:06
​Xasan Sheekh "Waxaan bixinay daymihii dalka lagu lahaa qaarkood"
Soomaliya 22.11.2016. 16:26
"Qaybo kamida India kuma dhalan gabar saddexdii bil ee u dambeysay" 24.07.2019. 11:03
Uhuru oo bedelaya Wasiirkii Maaliyada ee musuqa loo xiray 24.07.2019. 10:00
Puntland oo baahineysa warbixinta baaritaanka dilka maamulihii P&O 24.07.2019. 07:20
Puntland: Halkee ayuu marayaa qabanqaabada xuska 1da August? 24.07.2019. 06:26